अमेरिकामा नेपाली वैज्ञानिकले पत्ता लगाए स्किजोफ्रेनियाको दोस्रो बिमारी – Nepal Japan
नेपाल जापान २ चैत्र १९:०७
नेपाली चिकित्सक सहितको एक टोलीले स्किजोफ्रेनियामध्ये दोस्रो प्रकारको बिमारीको पत्ता लगाएका छन् । अमेरिकाको प्रतिष्ठित पेन्सल्भेनिया विश्वविद्यालयस्थित रेडियोलोजी विभागका नेपाली वैज्ञानिक डा. गणेश चन्दसहित अमेरिकाका अन्य विश्वविद्यालयका अनुसन्धानकर्ताले दोस्रो प्रकारको स्बिजोफ्रेनिया पत्ता लगाएका हुन् ।
डा. गणेश चन्दका अनुसार अध्ययनले स्किजोफ्रेनिया बिरामीहरूमा दुई अलग प्रकारका मस्तिष्क परिवर्तनहरू भेटिएको थियो । पहिलो प्रकारका बिरामीहरूमा मस्तिष्कको खैरो पदार्थ र सेतो पदार्थको मात्रामा कमी थियो ।
दुई प्रकारका बिमारीमा उमेर, लिङ्क, बिमारी अवधि, एन्टिसाइकोटिक औषधि डोज वा प्रकार, बिरामी सुरु भएको उमेर, सकारात्मक लक्षण र नकारात्मक लक्षणहरू फरक भेटिएनन् । यस अध्ययनमा तीन सय चौसठ्ठी स्वस्थ मानिस र तीन सय सात स्किजोफ्रेनिया बिरामीहरू सहभागी गराइएको थियो । विगतका अनुसन्धानहरूले सबै स्किजोफ्रेनिया बिरामीहरूलाई एकल प्रकारमा राख्थे जुन पहिलो प्रकार थियो । दोस्रो प्रकारको स्किजोफ्रेनिया बिरामीहरूको मस्तिष्क परिवर्तन अनुसन्धानकर्मीकै लागि ठूलो आश्चर्यको विषय बनेको डा। चन्द बताउनुहुन्छ ।
अध्ययनमा सहभागी २८ अनुसन्धानकर्मीमध्ये नेपाली वैज्ञानिक डा। गणेश चन्द प्रमुख अनुसन्धानकर्ता हुनुहुन्छ । यस अध्ययनमा पेन्सिलभेनिया विश्वविद्यालयका प्राध्यापक डा। क्रिस्टोस दाभत्जिकोस नेतृत्वमा रहेको एक महìवपूर्ण हिस्सा थियो । जसमा संयुक्त राज्य अमेरिका, जर्मनी, चीन, संयुक्त राज्य, नेदरल्यान्ड, ब्राजिल, स्पेन, इटाली र अस्ट्रेलियाका विश्वविद्यालयका अनुसन्धानकर्ताहरू सामेल थिए । नयाँ बिरामीका लागि नयाँ उपचार पद्धति नै आवश्यक पर्ने औँल्याउँदै डा. चन्दले अब उपचार अघि नै बिरामीको वर्गीकरण जरुरी रहेको उल्लेख गर्नुभएको छ ।